Alahady 23 mey 2021 - FJKM Amparibe Famonjena
ALAHADY PENTEKOSTA ANORENANA NY MAHA KRISTIANA
Alahady faha efatra mbola hibanjinana ny lohahevitra ifampitaizana : « Mampiorina ny mino ny herin’ny Fanahy Masina »
Ny Litorjia amin’ny endriny voalohany no nentina nanatanterahana ny fanompoam-pivavahana.
Niarahana namaky ny Salamo 103,1-5,22 ho fiderana an’Andriamanitra noho ny fahatsarany sy ny famindrampony. Avy eo nohiraina ny hira FFPM 20 : Tsaroanay tokoa izao
Natao ny vavaka : Natolotra ny Tompo ny voninahitra noho ny fahafahana mankalaza ny fotoana anio.
Nankalazaina Andriamanitra noho ny fitiavany ka nanomezany ny Zanany sy ny Fanahy Masina, noho ny famonjeny, natolotra Azy ny dera, saotra ary ny laza. Nisaorana ny Tompo noho ny fitahiany.
NY FANAMBARANA NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA
« Fa ny Fanahy Masina Izay nirahin’ny Ray amin’ny anarany, Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra ary hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra. Ary aza mampalahelo ny Fanahy Masin’Andriamanitra Izay nanasiavana tombon-kase anareo amin’ny andro fanavotana ary aoka samy halemy fanahy amin’ny namany avy hianareo fa hifampiantra sy hifamela heloka tahaka ny namelan’Andriamanitra ny helokareo ao amin’i Kristy Jesoa ».
Noventesina ny hira FFPM 177,2 : Ry Fanahy mpanazava
NY VAVAKA FIFONANA
Andriamanitra ô, tsy nahatanteraka ny Teninao izahay ka mangataka famelan-keloka Tompo ô hahatonga anay ho isan’ireo olom-boavonjinao. Amena.
Notohizina tamin’ny hira FFPM 175 : Avia Fanahy ô ! 1-2-3
NY TENY FAMELAN-KELOKA
« Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako ny famindram-poko aminao. I Kristy Izay tsy mahalala ota dia efa nataon’Andriamanitra ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan’Andriamanitra ao aminy kosa isika *. Ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo. »
Hira FFPM 176 : Avia Fanahy Masina ô ! 1-4
Fanekem-pinoana : Ho fanambarana ny finoana dia ny fanekem-pinoana voalohany no niarahana nanonona.
Tokony anio no nanatontosana ny voka-dehibe fa hahemotra amin’ny fotoana manaraka izany koa mangataka antsika hitondra am-bavaka izany fotoana izany.
Tontosaina any an-tokantrano izany ary entina any amin’ny tomponandraikitra amin’ny fotoana manaraka.
Vavaka fanolorana ny rakitra : Ray ô, fitahiana avy Aminao no ahafahanay manolotra ireto rakitra ireto ho an’ny asanao. Apetrakay Aminao ny rakitra rehetra tanterahinay. Atolotray ho fanatitra velona ho Anao ihany koa ny tenanay hampandrosoana ny fanjakanao. Amena.
Fihirana fanampiny faha 4 : Ry Fanahy ô, 1
Ray ô, Ianao nampianatra anay hisaotra amin’ny zavatra rehetra, koa misaotra Anao izahay fa na dia tsy afaka miaraka miombom-bavaka any am-piangonana aza, dia mbola afaka mihaino ny Teninao sy ny hafatrao isan-tokantrano. Mahatsiaro ny nanangananao ny Fiangonana izahay sy ny nandatsahanao ny Fanahy Masina tamin’ireo Kristiana voalohany, koa arotsahy aminay ry Tompo izany Fanahy Masina izany hahatonga ny Teninao hanambara aminay ny herin’ny Fanahy Masina, hampiorina ny finoanay sy hanome aina ny Fiangonanao. Mitenena Tompo ô, fa mihaino izahay. Amena.
Ezekiela 36 : 22-30
Jaona 16 : 12-15
I Korintiana 2 : 1-5
Natao ny hira : FFPM 183 : Midina ry Fanahy ô, 2
Ny I Korintiana 2 : 4-5 no nangalana ny toriteny. Ny kristiana dia misy karazany telo, dia ny kristiana ara-nofo, ny kristiana ara-tsaina ary ny kristiana ara-panahy. Ity fahatelo ity no ilaina amintsika dia ny kristiana ara-panahy. Aza kivy na mikatona aza ny trano fiangonana amin’izao Pentekosta izao. Ny kristiana dia mampiorina tsara ny finoany ary mahay mifankatia ary mazoto mandrakariva amin’ny fanompoana, rehefa mitoetra tsara amin’ny Fanahy Masina.Ny fanontaniana mipetraka dia hoe : « Inona no tokony atao mba ho tena kristiana ara-panahy manana an’i Kristy ?
Ny tokony atao dia mila aorina amin’ny herin’Andriamanitra ny finoana. Araka izany, ny fahendrena avy any ambony no ahazoantsika mitoetra ho kristiana ara-panahy resin’ny herin’Andriamanitra. Manaraka izany, ny fiorenana azo antoka ka itokiana amin’ny finoana dia ny fitarihan’ny herin’ny Fanahy Masina izay mahatonga antsika ho tena Fiangonana malaza tsy misy pentina na fikentronana.
Fahendrena avy any ambony :
Ny fahendren’izao tontolo izao dia mahasarika sy manintona saingy mamitaka ihany. Anisan’izany ny rhetorika na ny fanehoana ny fahaizana amam-pahalalana amin’ny alalan’ny lahateny izay nahasarika ny maro tamin’ny andron’i Paoly.
Tao Korinto, Paoly manokana dia nitory ny Filazantsara tamin’ny fomba tsotra mba hahatonga ireo mpanara-dia azy ho kristiana ara-panahy, tsy ho tahaka ireo kristiana ara-tsaina sy ara-nofo izay mora voahozongozona.
Ny kristiana ara-panahy dia mahay mandanjalanja sy mailo amin’ny fandraisana ny zavatra rehetra sy ny tontolo manodidina azy,
Ny kristiana ara-panahy ihany koa dia mihevitra ny zava-panahy mba handrosoany ao amin’ny Tompo,
Farany, ny kristiana ara-panahy dia miezaka ny ho tia ny namany sy ny olona rehetra.
Tamin’ny andron’i Ezekiela dia niala tamin’Andriamanitra ny zanak’Israely ka nanaraka ny fanompoan-tsampy. Tamin’izany no nanomezan’Andriamanitra azy ireo ny Teniny Izy Andriamanitra, mba hananany fo vaovao sy fanahy vaovao satria ny Fanahin’Andriamanitra na Fanahy Masina no napetrany ao amin’ny zanak’Israely, mba hampiverina azy ireo sy hahatonga azy hahatsiaro an’Andriamanitra.
Amin’izao Pentekosta izao dia raiso ny Fanahy Masina ary ekeo Izy.
Teo amin’ny Jiosy dia fotoana fanateram-bokatra ny Pentekosta, isika ihany koa dia tokony nanatanteraka izany fanateram-bokatra izany anio, saingy noho ny zava-misy eto amin’ny firenena dia tsy tontosa izany.
Omeo toerana ao aminao ny Fanahy Masina, ataovy hita eo amin’ny fiainanao ny fiasan’ny Fanahy Masina, amin’ny alalan’ny fandraisanao ny fahendrena avy any ambony. Raha tsy misy vokany eo amin’ny fiainantsika ny asan’ny Fanahy Masina dia maty antoka isika, ka toy ny tsy nankalaza ny Pentekosta, fa sahala amin’ny jentilisa very sy vavela tanteraka any ivelan’ny Fiangonana.
* Eo amin’ny fandraisana ny herin’Andriamanitra dia mila miorina amin’ny finoana isika.
Misy olona tsy mitory Teny fa ny tenany no toriny sy asandrany. Tsy mety izany fa ny Tenin’Andriamanitra no anorenana ny finoana, ka ny zava-panahy no atao laharam-pahamehana. Ny herin’ny Fanahy masina ihany no hanatanterahana izany. Aza manao izay mampalahelo ny Fanahy Masina fa avelao Izy hiasa sy hampiorina ny finoantsika.
Mba hampiorina antsika amin’ny finoana dia mila manaiky ny fiasan’ny Fanahy Masina isika, mila mahatoky ny Teny fikasany ihany koa isika ary mila manatanteraka ny baikon’ny Tompo.
Mangidy sy mafaitra izany hoe tsy afaka miditra any am-piangonana amin’ny andro Pentekosta izany. Tsarovy anefa fa ny fahatsiarovantsika ny filatsahan’ny Fanahy Masina sy fiasan’ny Fanahy Masina aminao no atao hoe Pentekosta.
Io no manome risi-po antsika hampandroso ny asan’ny Tompo sy hampandroso antsika mba hanolo-tena ho an’Andriamanitra. Tiavo ny olona rehetra na dia ny fahavalonao aza.
Ho tena kristiana ara-panahy anie isika ka ho voatafy hery, hahafahantsika manaraka ny fiainan’ny Fiangonana na inona na inona miseho.
Aoreno amin’ny herin’Andriamanitra ny finoanao ahafahanao miaina amin’ny fitarian’ny Fanahy Masina hahazoantsika hery iorenantsika tsara ao amin’ny Tompo. Amena.
Andriamanitra ô, an-kafaliana no isaoranay Anao noho ny hafatrao. Tianao izahay ho Kristiana ara-panahy, ka irinay mba ho hita aty anatinay ny fiasan’ny Fanahinao Masina. Entinay am-bavaka eto ity Fitandremana ity sy ny sampana rehetra ao anatiny mba hiasa amin’ny finoana sy amin’ny fahatokiana Anao hatrany.
Entina am-bavaka Aminao ny isan-tokantrano, ny mpivady, ny ankizy sy ny fianarany, ny zanaka am-pielezana. Entina am-bavaka Aminao ireo izay azom-pahoriana, ireo izay ao anatin’ny aretina sy ny fitsaboana azy ary ireo mpitsabo. Entinay am-bavaka Aminao ireo kivy sy ketraka ary very hevitra. Ataovy mandeha amin’ny Fanahy izahay ary apetrakay aminao ny fiainanay.
Manoloana izao fahasarotana eto amin’ny firenenay izao, dia entinay am-bavaka ny firenenay sy ireo tomponandraikitra isan-tsokajiny, ireo rehetra manana andraikitra eto amin’ny firenena toy ny mpiasan’ny Fitsarana, ny mpianatra sy ny fampianarana… mba hilaminan’ny firenenay.
Entinay am-bavaka ihany koa ny mpiasa rehetra. Entinay am-bavaka ihany koa ny Fiangonana sy ny tompon’andraikitra rehetra. Henoy ihany koa ireo rehetra izay manana hataka manokana ry Tompo.
Izany vavakay izany dia ampiarahinay amin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo.
Natao ny hira FFPM 174 : Fanahy Masina ô
Notononina ny Tondrozotra.
Natao ny hira : Mialoka Aminao.
Mpitendry orga : RABIAZAMAHOLY Hery Lanto
Mpandray an-tsoratra : ZANAHARITSIMBA Toky